Febroary 2020: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software | Avy amin'ny Linux
Febroary 2020: Ny tsara sy ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software
Androany, tapitra ny volana faharoa amin'ny taona, Febroary 2020, ary betsaka no navoaka ho vaovao, torolàlana, boky torolàlana, torolàlana, na fampahalalana mifandraika na manasongadina eo amin'ny sehatry ny «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux», samy ao amin'ny Avy amin'ny Linux toy ny amin'ny sisa amin'ny Internet.
Saingy, miresaka manokana an'ireo lahatsoratra amin'ity volana ity, Febroary 2020, izay mifarana, toy ny mahazatra, dia hanolotra famerenana ireo vaovao izahay zava-dehibe na miavaka, be tokoa tsara toa ratsy, mendrika ny tadidio na asongadino, manome a voa kely ilaina amin'ny fasika ho an'ny rehetra
Noho izany, antenainay fa ity famintinana ity amin'ny ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana, ao anaty sy ivelan'ny bilaogy «DesdeLinux» Ilaina tokoa ny manara-baovao hatrany amin'ny bokintsika sy ireo lohahevitra hafa mifandraika amin'izany «Informática y la Computación», ary ny «Actualidad tecnológica».
1 Febroary 2020 Famintinana
1.1.1 Ny tsara
1.1.2 Ny ratsy
1.1.3 Ilay mahaliana
1.1.4 Lahatsoratra natolotra hafa amin'ny volana
1.2 Ivelan'ny FromLinux
Febroary 2020 Famintinana
Tanisao ny kinova Trident OS miorina amin'ny Void Linux: Iray volana taorian'ny famoahana ny kinova beta, nanambara ny vaovao momba ny famoahana ny kinova Triden 20.02 izay namorona ny asa famaranana ny FreeBSD sy TrueOS ho any ifoton'ny fonosana Void ny mpamorona Trident. .
Ny Tutorial momba ny tontolo iainana DEBIAN Desktop dia vita: Nanomboka tamin'ny Janoary tamin'ny GNOME, KDE Plasma y XFCE, manampy ireo an'ny kanelina, VADIKO, LXDE y LXQT.
Blizzard izao dia milaza fa mitaky ny zon'ny mpamorona amin'ny fanovana lohateny: Nanapa-kevitra ny handray andraikitra indray ny Blizzard Entertainment momba ny zon'ny lalao sy ny forongony (mods), nanambara fa te hiantoka fa hanana ny zon'ny lalao hafa nalaina avy tamin'ny fanovana ny lohateny.
Mitandrema raha mandoa vola amin'ny Google Pay ianao amin'ny alàlan'ny vola Paypal anao: Betsaka ny olona no nanomboka nitatitra fa nahita fandoavam-bola tsy nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny kaonty PayPal tamina sehatra maro samihafa, toa ny forum PayPal na Twitter, izay itovizan'ny tatitra rehetra fa nampiasa ny fampidirana Google Pay amin'ny PayPal izy rehetra.
OpenWifi, tetikasa loharano misokatra hampiharana wifi mifototra amin'ny FPGA sy SDR: Nandritra ny fihaonambe FOSDEM 2020 ny fampandrosoana loharanom-baovao misokatra voalohany an'ny OpenWifi "Wi-Fi 802.11 a / g / n" endrika endrika onjampeo feno sy ny famolavolana voafaritra programmatic (SDR, Software Defined Radio) ary FPGA.
Raspberry Pi 4: orinasa espaniola miasa mba hitondra an'i Vulkan: Ireo izay manana Raspberry Pi 4 SBC dia ao anaty vintana, satria orinasa Espaniola antsoina hoe Igalia no miasa mafy hitondra ny Vulkan graphics API ao amin'ity fitaovana ity ihany koa. Miaraka amin'i Vulkan ianao dia afaka miasa amin'ny hery bebe kokoa sy rafitra maoderina kokoa ho an'ity sehatra informatika Britanika ity.
Ny safidy mahasoa sy mahaliana indrindra ho an'ny rindranasan'ny gamer ho an'ny GNU / Linux dia nozahana: Fiatrehana ireo fampiharana fanta-daza gamehub, Itch.io, Lutris y Steam, mba hampisehoana fa ny GNU / Linux amin'izao fotoana izao dia rafitra miasa tsara ho an'ny Gamers miaraka amin'ny ambaratonga tena akaiky ny an'ny Windows sy MacOS.
Lahatsoratra natolotra hafa amin'ny volana
Fandefasana hafatra Session y deltachat: Solony mahaliana ho an'ny WhatsApp.
Mikasa ny hanangana sehatra fampiantranoana kaody sy sehatra fiaraha-miasa ny FSF
Android-x86 9.0-r1: Ny tetikasa Android-x86 dia faly manambara ny famoahana ny kinova 9.0-r1 amin'ny besinimaro. Ity no kinova miorina voalohany ho an'ny Android-x86 9.0 (pie-x86). Ny kinova 9.0-r1 dia miorina amin'ny kinova farany an'ny Android 9.0.0 Pie (android-9.0.0_r53).
Linux Mint 4 Beta (LMDE): Ny ekipan'ny Linux Mint dia nanambara ny fisian'ny kinova beta vaovao amin'ny DEBIAN Edition an'ny Distro -n'izy ireo. LMDE dia sehatra iray izay manome fonosana sy haitao manokana amin'ny Linux Mint mampiasa ny fizarana DEBIAN ho toy ny fotony, hanolorana ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny sehatra hafa noho ny Ubuntu, hisorohana ny asa fanampiny raha sanatria hanjavona i Ubuntu, ary hiantoka ny rindrambaiko novolavolain'izy ireo dia mifanentana ivelan'ny Ubuntu.
ManjaroLinux 19.0: Navoaka ny kinova farany azo zakaina tamin'ny fizarana Arch Linux Manjaro Linux, izay antsoina hoe 'Kyria'. Ao amin'ny fanontana miaraka amin'ny XFCE dia manolotra traikefa nahafinaritra, mifangaro ary avant-garde ao amin'ny Desktop Environment. Ary koa, miaraka amina lohahevitra vaovao antsoina hoe 'Matcha'. Ao amin'ny fanontana miaraka amin'ny KDE Plasma dia manome tontolo birao matanjaka sy matotra ary manankarena amin'ny endrika tokana, nohavaozina tanteraka.
Famoahana hafa mahaliana amin'ny volana: IP Fire 2.25 Core 141, netrunner 20.01, GoboLinux 017, NG Firewall 15.0, Elive 3.8.4, MX Linux 19.1, F4OS 4, NetBSD 9.0, Project Trident 20.02, Ubuntu 18.04.4 LTS, Tail 4.3, Sparky 2020.02, Tiny Core Linux 11.0, Raspbian 2020-02-05, OS ambaratonga 5.1.2, Tsotra Linux 20.1, NetBSD 9.0 RC1 ary Sokafy ny Mandriva Lx 4.1.
Toy ny mahazatra dia manantena izahay East "famintinana kely ilaina" miaraka amin'ny miavaka indrindra anatiny sy ivelan'ny bilaogy «DesdeLinux» ho an'ny volana «febrero» manomboka amin'ny taona 2020, dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahafinaritra sy goavambe ary mihamitombo ny fampiharana sy ny «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Febroary 2020: Ny tsara sy ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software
Ivan palomino dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao amin'ity karazana famoahana ity sy ny ezaka ilaina amin'izany, manantena aho fa hitohy toy izao izy ireo, ny marina dia tsy manana zavatra betsaka holazaina aho satria tsy hitako loatra ireo lohahevitra maro izay atrehin'izy ireo, noho ny ny relay Manjaro, toa tsy misy mijanona intsony io lamasinina io, arahaba.
Valiny tamin'i Ivan Palomino
Miarahaba anao Ivan! Misaotra anao tamin'ny hevitra tsara nataonao ...
KaOS 2020.02 tonga Plasma 5.18 LTS, Linux 5.5 ary maro hafa
Steam: Community Client, fivarotana ary lalao ho an'ny GNU / Linux